မီးပွိုင့်မှာ ကျနော်…ရှိတယ်….။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မီးပွိုင့်မှာ ကျနော်…ရှိတယ်….။
Posted by ရာဇ၀င်လူဆိုး on Sep 5, 2012 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 29 comments
” တောက်…ဒီမီးပွိုင့်ကလဲ ဘာကြောင်နေလဲ မသိဘူး ”
ခပ်ပြင်းပြင်း တောက်ခေါက်သံတစ်ချက်က ညဉ့်ယံကို ဖောက်ထွင်းပြီးပေါ်လာခဲ့တယ်။… နေရာက လှည်းတန်းမီးပွိုင့်…။ တောက် ခေါက်လိုက်သူက ကင်းတဲမှာ တာဝန်ကျတဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲ တစ်ဦးရဲ့ အသံ…။ အကြောင်းရင်းကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ စက္ကန့် ၃၀ လောက်ကမှ မီးစိမ်းသွားတဲ့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း လမ်းကြောက ချက်ချင်း ၀ါ သွားပြီးမကြာခင် အင်းစိန် လမ်းယာဉ်ကြော မီးစိမ်းသွားလို့ပါပဲ ။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကြုံရတာ ပထမဆုံးအကြိမ် မဟုတ်တော့။အရင်လကပဲ မီးပွိုင့် ချို့ယွင်းနေလားဆိုပြီး ပြုပြင်သူတွေ လာလုပ်ပေးထားတာ။ အခုထပ်ပြီး မီးပွိုင့်က ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့.?
သူ့အတွေးမဆုံးလိုက်ပါ ..။ အင်းစိန်လမ်းကြောမှ မီးသတ်ယာဉ်တွေနဲ့ လူနာတင်ကား တစ်စီး အပြင်းဖြတ်သန်း မောင်းနှင်သွာပါတော့တယ်…..
ကျနော်….။ အိပ်ပျော်နေတဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲကို စိုက်ကြည့်နေရင်း မီးစိမ်းပြောင်းသွားတာဟာ မီးပွိုင့်ချို့ယွင်းလို့မဟုတ်၊ ကျနော်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာရယ်၊ ကျနော်ခံစားရတဲ့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို နောက်လူ…နောက်လူ တွေအတွက် သူ့ကို သေချာပြောပြ သတိပေးချင်ပေမယ့် အသံကထွက်မလာခဲ့ဖူးလေ…။ ဒါနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဘ၀ကိုစိတ်ပျက်စွာနဲ့ နီ၊စိမ်း၊ပြာ အရောင်၃ရောင် တပ်ဆင်ထားတဲ့ မီးပွိုင့်ပေါ်တည့်တည့်မှာပဲ စောင့်စောင့်ထိုင်ရင်း ကျနော့်ဘ၀ရဲ့ အပြောင်းအလဲ တစ်ဆစ်ချိုး နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်တွေကို ရုပ်၇ှင်အနှေးပြကွက်တွေလို ပြန်မြင်ယောင် လာမိတယ်။
အက်ဆီးဒင့် တစ်ခုကြောင့် ဒါဏ်ရာတွေနဲ့ ကျနော်ကို တင်ဆောင်လာတဲ့ အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်ရဲ့ ဥသြသံက နားထဲမှာဆူညံနေသလို .. လည်ချောင်းထဲမှာလဲ ခြောက်သွေ့အက်ကွဲနေပြီး ကြိုးစားပြီးရှူနေတာတောင် အသက်ကို တစ်ဝက်ပဲ ကျနော်ရှူလို့ရတယ်။ လောကကြီးမှာ ဒီလောက်တောင်ပေါတဲ့ အောက်ဆီဂျင်တွေ ကျနော်အတွက်မှ ဘာကြောင့်ရှားပါးနေတာလဲ..။ ဝေဒါနာ ဖိစီးလွန်းလို့ထင်ပါရဲ့..။ ၀င်သက်ထွက်သက် သိပ်ခက်ခဲလွန်းနေတော့ ရင်အစုံက ဖားဖိုတစ်ခုလို နိမ့်ချည်၊မြင့်ချည်..။ ဘေးနားက မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အားပေးသံတွေ..။ ကျနော့်မျက်လုံးတွေ ပြာဝေနေပေမယ့် သူ့တို့အသံတွေကို ကောင်းကောင်းကြားရတဲ့အထိတော့ ကျနော်ကိုယ်မှာခွန်အားတွေကျန်နေသေးတာ ကျနော်သိတယ်။
“ဟာ….ဒီမီးပွိုင့်ကလဲ တမှောင့်..။ မိပြန်ပြီ ”
ဘေးနားက သူငယ်ချင်း ကိုနောင်ရဲ့ စိတ်မ၇ှည်သံနဲ့ အတူ ကားလေးကလဲ တုံ့ခနဲရပ်သွားပါရော..။ နားထဲမှာ ဥသြသံ၊ ကားဟွန်းသံ၊ စကားသံတွေ ကြားတစ်ချက် မကြားတစ်ချက်ဖြစ်နေပြီ။ ကြိုးစားပြီး၇ှူနေရတဲ့ အသက်က ခပ်ငွေ့ငွေ့ရယ်။ ကျနော် ဆေးရုံကို မြန်မြန်ရောက်ချင်တယ်ဗျာ…။ ကျနော်သေလို့မဖြစ်သေးဘူး..။ ကျနော်လုပ်ချင်တာတွေအများကြီး… ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ လုပ်ခွင့်ရချင်သေးတယ်..။ ဒါကြောင့် ကုသမှုတစ်ခုခု ကျနော် အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ အချိန်ကျမှ မီးပွိုင့်ကလဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပိတ်မိနေသေးတယ်။ ကံမကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့ ဘ၀မှာ ထပ်ပြီးကံဆိုးတာလားဆို မပြောတတ်တော့ပါဘူးဗျာ…။
“ခဏလေး… ကျနော် တာဝန်ကျယာဉ်ထိန်းရဲကို အရေးပေါ်လူနာတစ်ယောက်ပါလာလို့ လမ်းကြောတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ပေးဖို့
အကူအညီ သွားတောင်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ ..”
စိတ်မြန်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောပြောဆိုဆိုဆင်းသွားလိုက်သလိုပဲ… ကျနော့် နားတွေအူ နေပြီဗျာ…။လူနာတင်ယာဉ်ရဲ့ အရေးပေါ်အချက်ပေးသံကြောင့် ကျနော်တို့ကားရှေ့မှာ ပိတ်နေတဲ့ ကားတစ်ချို့က လမ်းကြောင်းတွေ တဖြည်းဖြည်းရှင်းပေနေကြတယ်။ ဒါဆို ဟိုယာဉ်ထိန်းအရာရှိကရော ဒီဥသြသံကို မကြားဘူးလားမသိ။ မီးသတ်ကားတွေ၊ ရဲကားတွေ၊ လူနာတင်ယာဉ်တွေ နဲ့ VIP လူကြီးတွေသွားတဲ့ယာဉ်တွေက အရေးပေါ်အချက်ပေးသံကြားရင်ေ၇ှ့မှာရှိတဲ့ယာဉ်တွေက ဘေးကိုကပ်ပြီးလမ်းရှင်းပေး၊ မီးပွိုင့်တွေက အတတ်နိုင်ဆုံး မြန်မြန်လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် အချက်ပေးဖို့ ဒီလို ပုံမှန်အသံထက်ထူးခြားတဲ့ ၊ ပိုအသံကျယ်တဲ့ အရေးပေါ်အချက်ပေးကိရိယာတွေကို တပ်ဆင်ပေးထားကြတာလို့ပဲ ထင်မိတယ်။ ဒါဆို ကျနော်ကို သယ်ဆောင်လာတဲ့ ယာဉ်မှာပါတဲ့ အချက်ပေးကိရိယာက အသံတိုးနေလို့လား။ မီးပွိုင့်နဲ့ ကျနော်တို့ကားလဲ အဝေးကြီးမဟုတ်တော့ ဒိအသံကို တာဝန်ကျ ယာဉ်ထိန်းအရာရှီကြားနိုင်လောက်မယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်..။
“မီးပွိုင့် စိမ်းပြီ..၊ စိမ်းပြီ..။ ဦလေးရေ မြန်မြန်လေးသာမောင်းဗျာ ”
ယာဉ်ထိန်းရဲဆီ မရောက်မှီ မီးစိမ်းလို့ လှည့်ပြန်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းအသံနဲ့အတူ.. ကားလေးက ” ဂျိန်း..ကနဲ “…ကတ္တရာလမ်း ချိုင့်ထဲကားဘီးဆောင့်ကျသွားတော့ ကျနော့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ကလီစာတွေကလဲ နင့် ကနဲ..။ ကားကို ဂီယာချိန်း၊ အင်ဂျင်ကိုစွမ်းအားတင်ပြီး မြန်ဆန်တဲ့အရှိန်နဲ့ သွားနိုင်သလို ကျနော့် ခန္ဓာကိုယ်ကိုလဲ ဂီယာချိန်း၊ ရှီသမျှစွမ်းအားတွေတင်ပြီး အသက်၀၀ ရှူချင်လိုက်ဗျာ။
မျက်လုံးတွေ ပြာဝေနေသလို စကားသံတွေကိုလဲ ကြားတစ်ချက် မကြားတစ်ချက်။
“ဦးလေး မြန်မြန်မောင်းပါ..ဒီမှာလူနာက နှလုံးခုန်နှုံးကျနေပြီ ”
ကျနော်ကို အောက်ဆီဂျင်ပေးပြီး အရေးပေါ်ကုသပေးနေတဲ့ သူနာပြုဆရာမလေးရဲ့ စကားသံအဆုံး လူနာတင်ယာဉ်ရဲ့ မှန်ပြတင်းခပ်ဟဟလေးကြားကနေ
ဒီကားပေါ်ရောက်ကတည်းက ပြာဝေပြီး ဘာကိုမှကွဲပြားစွာမမြင်နိုင်တဲ့ ကျနော်မျက်လုံး သူငယ်အိမ်ထဲကို နီ၊စိမ်း၊၀ါ ရောင်စုံတစ်ခုက “ထင်း…ကနဲ…..
ပြီးတော့ ကျနော့် ခန္ဓာကိုယ်လဲ “လွင့်..ကနဲ..လွင့်..ကနဲ” ….ငှက်မွေးလေးတစ်ခုလို လွင့်မျောသွားပါတော့တယ်။ ဘာဖြစ်မှန်းကို မသိလိုက်တဲ့ အခိုက်အတန့်လေးပါပဲ…..။
ကျနော်သတိထားမိတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကျနော့်ကိုယ် ကျနော် ပြန်မြင်နေရပြီိလေ..။ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ငိုကြွေးသံတွေနဲ့အတူ ဆရာဝန်ကြီး
တစ်ယောက်ရဲ့ မှတ်ချက်ချ ပြောဆိုသံကိုလဲ ကြားနေရပါတယ်..။
“လူနာက ၁၅ မိနစ်၊ မိနစ်၂၀ လောက်သာ ကျနော်တို့ဆီကို စောပြီးရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ့အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ဖို့ ၇၀% အခွင့်အရေးရှိပါတယ်
အခုက သွေးထွက်လွန်သွားတာရယ် ၊အချိန် နောက်ကျတာရယ်ကြောင့်…. ကျနော်တို့လဲ စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ….”
” တောက် !..အဲဒီမီးပွိုင့်ကြောင့်ပေါ့ ဆရာရယ်။ ကျနော်သူငယ်ချင်း သေရတာ ”
အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းကိုနောင်…စိတ်မြန် လက်မြန် ကိုနောင်..သူ ပေါက်ကွဲနေတဲ့ စကားသံ..သူတို့တွေ ပြောတာတွေက ကျနော် သေသွားပြီပေါ့။ လူ့လောကကြီးမှာ ကျနော်ရှင်သန်နေတဲ့ လူမဟုတ်တော့…ပြိးတော့ ဘာတဲ့ … မီးပွိုင့်ကြောင့် ကျနော်သေခဲ့ ရတာတဲ့..။ ကျနော်ကတော့ ဒီလိုမထင်ဘူး ကျနော် မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့် ဒီဘ၀ရောက်ခဲ့တာလို့ပဲ မြင်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ထပ်ခါထပ်ခါ ပေါက်ကွဲပြောဆိုနေတဲ့ ကိုနောင့် စကားသံတွေကြောင့် ကျနော် နောက်ဆုံးမြင်မိတဲ့ နီ၊စိမ်း၊၀ါ..တစ်ခုဆီ ကျနော်အပြေးလှမ်းထွက်ခဲ့မိပါတော့တယ်..။
ဒီအဖြေကို ကျနော်သိချင်လာတယ်။ သူ့ကြောင့် ငါဘာဖြစ်လို့ သေခဲ့၇လဲဆိုတာကို သိချင်စိတ်ပြင်းပြစွာနဲ့ ဒီမီးပွိုင့်ပေါ်မှာပဲ တစ်နေ့တစ်နေ့ ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး
အဖြေကို၇ှာဖွေနေခဲ့မိတယ်။ စကားပြောဖော်မရှိ၊ ကားသံတွေဆူဆူညံညံနဲ့ပဲ နေစဉ်နဲ့အမျှ..ကြာတော့မုန်းလာမိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြာလာတော့
ဒါက ကျနော်ဘုံဗိမ္ပာန် တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီ။
တစ်နေ့တော့ ထုံးစံအတိုင်း မီးပွိုင့်ပေါ်မှာထိုင်နေရင်း…ကျနော်ကိုယ်တိုင် နောက်ဆုံးကြားခဲ့ဖူးတဲ့ အသံ..ဟုတ်တယ်… ဒါ..ဒါ လူနာတင်ယာဉ်တစ်စီး
ရဲ့ အရေးပေါ်အချက်ပေးသံ ဆိုတာ ကျနော်သေချာသိလိုက်တယ်..။ မီးပွိုင့်မိနေပြီး ၁၀ မိနစ်လောက် ဆူညံစွာကြားနေရတော့ နားတွေတောင် အူလာတယ်။
ဘာတွေများဖြစ်တာပါလိမ့်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ငေး… နေတုန်း……………
“ဟိတ်..ကောင်လေး..။ မင်းဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲ ကွ..”
အသံနဲ့ အတူ ပုခုန်းကို အပုတ်ခံလိုက်ရတော့ အံသြစွာနဲ့ အသံရှင်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့… အသက် ၅၀ ကျော် ဦးလေးကြီးတစ်ယောက်..။
ကျနော်လို ၀ိဥာဉ် တစ်ကောင်ပါပဲ။ ၆ လလောက် စကားပြောဖော်မရှိ တစ်ယောက်တည်းနေလာခဲ့၇တော့ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် စကားတွေဖောင်ဖွဲ့အောင်ပြောရင်း
နောက်ဆုံး ကျနော်လိုချင်တဲ့ အဖြေကိုပါ မေးမိလိုက်ပါတယ်။ မီးပွိုင့်တွေက လူသတ်တတ်လား လို့ပေါ့။
” ကောင်လေး..မင်းတယ်ညံ့သကိုးကွ..။ ဟောဟိုမှာ မီးပွိုင့်မိပြီး နားညီလောက်အောင် အရေးပေါ်အချက်ပေးသံ ပေးနေတဲ့ လူနာတင်
ကားကိုကြည့်..။ အေး..သိပ်မကြာခင် သူငယ်ချင်းအသစ်တစ်ယောက်တော့ မင်းထပ်ရတော့မယ်ကွ..အဟေး..ဟေး….။
သူလဲ ဆေးရုံတောင် ရောက်မယ်မထင်ဘူး. ။ ဒါအဖြေပဲ ကောင်လေး..။ ”
အဲဒီနေ့ကစလို့ မီးသတ်ယာဉ်တွေ၊ လူနာတင်ယာဉ်တွေ အရေးပေါ်အချက်ပေးသံတွေနဲ့ လာတိုင်း အချိန်နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမှုမရှိစေပဲ လိုရာခရီးရောက်ဖို့
သူတို့လာတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ကျနော်မီးပွိုင့်ပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး ပွိုင့်ကို မီးအမြဲ စိမ်း ပေးနေမိပါတော့တယ်။
+++ကျနော့်တာဝန်ကတော့ ဂုံးကျော်တံတားကြီးပြီးသွားတဲ့ အထိ၊ ယာဉ်ကြောတွေ ဒီထက်ပို၇ှင်းလင်းတဲ့အထိ၊ အရေးပေါ်အချက်ပေးသံနဲ့လာတဲ့ ယာဉ်မှန်သမျှ အချိန်မှီလို၇ာခ၇ီးကို လမ်းကြောင်း၇ှင်း၇ှင်း အမြန်ဆုံး သွားနိုင်တဲ့ နေ့အထိပါပဲ+++
ဆေးရုံအသွား..မီးပွိုင့်မိပြီး ဆေးရုံအချိန်မှီမရောက်လို့ အသက်မမှီပဲ ဆုံးသွားတဲ့ ကျနော့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အတွက် …ရေးတာပါ။
မီးပွိုင့်မှာက မီးသတ်ကားလဲ မိ၊ လူနာတင် ကားလဲ ပွီုင့်မိဆိုတော့ … ဒီလိုကားတွေရဲ့ အရေးပေါ်အချက်ပေးသံကို အလေးထားစေချင်ကြောင်း..။
မီးပွိုင့်နဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲက ဂျင်းစိမ်းနဲ့ မိတ်သလင်လိုပါပဲ။
အရေးပေါ်ယာဉ်မောင်းတွေ က ဇသိပ်ပြင်းတာကလားဗျ
ယာဉ်ထိန်းရဲ လမ်းရှင်းပေးပေး မရှင်းပေးပေး ၊ မီးပွိုင့်နီနီ စိမ်းစိမ်း
လိုရာဌာန ကို အမြန်ဆုံးရောက်ဖို့ ၊ မောင်းချင်သလို မောင်းကြတာပဲ
အစ်ကို့ သူငယ်ချင်း မန်းတလေးမှာ သာ နေခဲ့တယ်ဆိုရင် အခြေအနေ တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်
ကျမလည်းရွာထဲဝင်စက အဲဒီအကြောင်း“ ambulanceနဲ့ အသိစိတ်လေးရှိစေချင် ” ဆိုပြီး မရေးတတ်ရေးတတ် ရေးခဲ့တယ်။
ကိုလူဆိုးရဲ့ ဒုတိယမိရွာအဝင်လက်ရာကတော့ ရှယ်ဘဲ
ခံစားမှုဆိုပေမဲ့ လက်တွေ့ နဲ့ ထင်ဟတ်ထားတာ သဘောကျတယ်
လက်မလေး ထောင်ခဲ့ တယ်ဗျာ
အမ်းဗျူးလန့်ကားတွေ ပွိုင့်မိတာဆိုးတဲ့ကိတ်စဘဲ။ တကယ်အရေးပေါ်နေရင် မီးပွိုင့်တွေကို ကြိုရှင်းထားဖို့ အကြောင်းကြားထားဖို့လိုမှာပေါ့။ အဲလိုလုပ်လို့ရတဲ့ စနစ်ရောမရှိဝူးလား။
Italian Job ဇာတ်ကားကိုပဲ ပြန်ညွှန်းရမှာပါပဲ..။
Traffic ကို ထိန်းတဲ့ စနစ်အကြောင်းပါ..
မီးပွိုင့်တွေမှာ ကင်မလာတွေ တပ် ဆင်ဆာတွေ တပ်ပြီး
မီးပွိုင့် အနီအစိမ်းကို ဆာဗာကနေပြီး ဗဟို ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်တဲ့
traffic flow ကို ချောမွေ့ဖို့ အတွက် .. မီးပွိုင့်အနီ အစိမ်း ဆိုတဲ့
စက္ကန့်အပိုင်းအခြားလေးတွေသာ လိုတိုးပိုလျှော့ လုပ်ဖို့ လိုတာပါဗျာ..
တစ်ခုရှိတာက ဒီလိုကားဖြတ်လာပြီဆိုတာနဲ့ မီးပွိုင့် တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ယာဉ်ထိန်းရဲချင်း သတင်းအချက်အလက်ကို ချိတ်ဆက်ပြီး… သတင်းပို့ထား… ။ နောက်ပွိုင့်တစ်ခုက ယာဉ်ထိန်းရဲက အရေးပေါ် အချက်ပေး အသံကြားတာနဲ့ ပွိုင့်ကို ရှင်းပေး..။ ဒီလိုလေး နဲနဲတာဝန်ယူ သိတ်တတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်…။ ကိုဂီပြောသလို မီးပွိုင့်မှာ ကင်မရာတွေ ၊ ဆင်ဆာတွေ တပ်ပြီး ဆာဗာက ထိန်းချုပ်တဲ့ စနစ်မျိုး မလှမ်းနိုင်ရင်တောင် တော်တော်လေး အဆင်ပြေသွားမယ်ထင်တယ်။ အခုက လူနာတင်ယာဉ်လဲပိတ်၊ မီးသတ်ကားတွေလဲ ပိတ်။ လောင်စရာရှိတာ ကုန်သွားမှ မီးလောင်ပြင်ကို ရောက်နိုင်သလို၊ တကယ့်အရေးကြီး လူနာလဲ အသက်ထွက်ပြီး ဆေးရုံက ရေခဲတိုက်ထဲကို ကားတစ်ခါတည်းမောင်းဝင်ခိုင်းရမလို ဖြစ်နေပြီ ဆြာရေ..။
အဲ..လူကြီးလမ်းကြောင်းသံ ကြားရင်တော့ ဝေါကီတော်ကီ တစ်ဂီဂီ တစ်ဂျစ်ဂျစ်နဲ့ တစ်မြိုလုံး မီးပွိုင့် အကုန်အစိမ်း… ကိုပေတို့အဖွဲ့တွေတောင် ကျောက်စိမ်း တွေဟ ဆိုပြီး အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ချင်လောက်အောင် အကုန်စိမ်းနေတာ..။ အဟဲ..နောက်တာ…။
လူနာတင်ယာဉ်တစ်စီးက တစ်ဝီဝီ အသံပေးပြီး
လမ်းကြားထဲကနေ ထွက်လာတယ် ..
ဒါကို လိုင်းကားတွေရော အခြားကားတွေကပါ
အဲ့ဒီ လူနာတင်ယာဉ်ကို နေရာဖယ်ပေးလိုစိတ် သိပ်မရှိကြတာကို မြင်ခဲ့ရဖူးပါတယ် ..
(အသံကို အလေးမထားတဲ့ အကြောင်းကို ပြောတာပါ .. တကယ် မဖြစ်သင့်တာပါပဲ ..)
အင်း ဝင်လျှာရှည်လိုက်ဦးမယ် ။
သြဇီ အကြောင်း သိပ်ပြောတယ်လို့ မထင်ပါနှင့် နော် ။
သြဇီမှာတော့ သူနာပြုယာဉ်လောက်ကို ၊
မီးပွိုင့် ရှင်းပေးတဲ့ စံနစ် မရှိဘူးကွယ့် ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီမှာက ၊
အဖွားကြီး တစ်ယောက် ဆေးခန်းပြဖို့ ၊
Taxi ခ မကုန်ချင်ရင်လည်း ဒူးနာနေတယ် ၊
အကြောင်းပြပြီး သူနာပြုယာဉ် ခေါ်လေ့ရှိတော့ ၊
( သူနာပြုယာဉ် ခေါ်ခကို အစိုးရက ပေးတယ်လေ )
မီးပွိုင့် တစ်ခုမှာ တစ်နာရီ တစ်စီးလောက်တော့ ဖြတ်နေတာပဲ ။
” သူနာပြုယာဉ် ” လို့သုံးပြီး ၊
” သူနာတင်ယာဉ် ” လို့ မသုံးရခြင်း အကြောင်းရင်းက ၊
ဒီက သူနာပြုယာဉ် တွေက လူနာဆီ အသွားမှာသာ ၊
အလျှင်လိုတဲ့အတွက် Siren ဥသြ ဆွဲလေ့ရှိပြီး ၊
ဆေးရုံကို အသွား ခရီးစဉ်မှာတော့ Siren ဥသြ ဆွဲလေ့ မရှိဘူးကွဲ့ ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီက သူနာပြုယာဉ် တွေထဲမှာ ၊
ဆေးရုံလောက်နီးနီး ပစ္စည်း နှင့် လူ အစုံပါလို့ကွယ် ။
သူနာပြုယာဉ် ၊ မီးသတ် ၊ ရဲ ကား စတာ တွေရဲ့ ၊
Siren ဥသြ ဆွဲသံတွေကလဲ ၊ အရေးကြီးမှုပေါ်မူတည်ပြီး ၊
အသံ မတူဘူးကွဲ့ ၊ ခွဲထားတယ် ။
သူနာပြုယာဉ် ၊ မီးသတ် ၊ ရဲ ကား တွေ သွားဖို့ ၊
တစ်လမ်းသပ်သပ်ကိုရှိတယ် ကွဲ့ ။
အရေးပေါ် ကိစ္စ ကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ မေါင်းခွင့် မရှိဘူး ။
မေါင်းတဲ့သူကို ဒါဏ်ရိုက်တယ်ကွယ့် ။
အဲတော့ ကားဘယ်လောက်ကျပ်ကျပ် ၊
အဲဒီ အရေးပေါ်လမ်းကတော့ ရှင်းနေတာပဲ ။
သူနာပြုယာဉ် ၊ မီးသတ် ၊ ရဲ ကား တွေ အရေးပေါ် ဥသြဆွဲလာလို့ ၊
ရှောင်နိုင်ရဲ့နှင့် ရှောင်မပေးရင် ဒါဏ်ရိုက်တယ်ကွယ့် ။
Justice AB says:
ဘဖောရေ… ဒီမှာတော့ ရဘူးဗျ… ကားပေါ်မှာ လူနာတွန်းလှည်းတောင် တစ်ခါတစ်လေ အစုတ်။ ဆေးပစ္စည်းအစုံနဲ့ ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန် ပါဖို့ ဆိုတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကတော့ ဒီမှာ ငွေ..ငွေ..ငွေပေါ်မူတည်ပါတယ်..။
သြစီနဲ့ နိုင်းယှဉ်ပြောပြပေးလို့ ဗဟုသုတတိုးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း..။
အင်းးးးးး ကိုရာဇ၀င်လူဆိုးရေ …
မနက်က လှည်းတန်းမီးပွိုင့်ကို ဖယ်ရီရောက်တော့ ပွိုင့်ပေါ်လှမ်းကြည့်မိတယ်
သူတို့တွေများ ထိုင်နေကြမလားဆိုပြီးတော့လေ …..
ယူအက်စ်မှာ.. ပြည်နယ်ရဲ့အစိုးရအလုပ်လုပ်နေတဲ့.. အဲဒီမီးပွိုင့်ထိမ်းချုပ်ပရိုဂရမ်တွေ ဆွဲပေးစီစဉ်ပေးရတဲ့ အင်ဂျင်နီယာတယောက်နဲ့သိတယ်..
ယူအက်စ်မှာ.. မီးပွိုင့်နဲ့.. အရေးပေါ်ကား(ရဲ၊ မီးသတ်၊ လူနာတင်ယဉ်) နဲ့..မဆိုင်ရေးချမဆိုင်..
မီးပွိုင့်က.. သူ့ဖာသူ.. နီချင်နီ..စိမ်းချင်စိမ်း.. ဥသြဆွဲပြီး ဖြတ်ထွက်တာပဲ..
ဘေးက..ကားမှန်သမျှ.. ဘေးထိုးချပြီး ရပ်ပေးရတယ်..။ မမှီရင်.. ရောက်နေတဲ့နေရာ ရပ်ရပါတယ်..။
ဟိုးအရင်က. လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ရဲ့. မီးပွိုင့်ထိပ်တွေမှာ.. ဆင်ဆာတပ်ထားပြီး.. အရေးပေါ်မီးလှည့်တာဆင်ဆာကမြင်ရင်..လမ်းတလျှောက် ပွိုင့်တွေအကုန်စိမ်းပေးတယ်..။
အခုကတော့.. လမ်းမပေါ်မှာ ဆင်ဆာတွေချထားပြီး.. ကားအမြန်နှုန်းနဲ့.. ကားအနေအထား ကွန်ပြူတာကတွက်ပြီး.. လိုသလိုချိန်ညှိပေးတယ်..။
မှတ်မိသလောက်.. ၉၁၁ ဖုံးဆက်ခေါ်ရင်.. အရေးပေါ်ကားတွေလာပါတယ်..
ပြီးရင်.. ဒေါ်လာ ၅၀၀ကနေ.. ၈၀၀လောက်အထိ.. ငွေတောင်းလွှာလိုက်လာပါတယ်..။
အလကားမပေးတော့ပါတဲ့..။ (အရင်ကတော့ အလကား…)
အရေးပေါ်ကားမြင်.. ထိုးရပ်ရတဲ့.. ဥပဒေလုပ်ပေးပြီး..( စရိပ်ကာမိအောင်). မရပ်သူတွေကို.. ဒဏ်ကြေးမျိုးမျိုးမြက်မြက်ကလေး..ချသင့်ကြောင်း…
ဒါနဲ့ ခုနကပဲ …မီးပွိုင့်ကိုရောက်တော့ ကျနော်ကို သူတို့လှမ်းပြောလိုက်သေးတယ်..။ မနက်က မနှင်းဆီငုံ အရမ်းလှနေတယ်တဲ့ ဗျား…။ ဒါနဲ့ မီးပွိုင့်မြန်မြန် စိမ်းသွားတယ်မဟုတ်လား..။ သူတို့ ..သူတို့…
မီးပွိုင့်မှာ မီးအမြဲစိမ်းနေလို့လည်းမရပြန်ဘူး။ ယာဉ်ကြောရှုပ်ထွေးမှုတွေ အမြဲဖြစ်နေမှာပေါ့။ တစ်ဖက်က ကြာကြာစိမ်းနေရင် တစ်ဖက်က ကြာကြာလမ်းကြောပိတ်နေမှာပဲ။ ဒီတော့ မျှတစွာ မီးစိမ်းဖို့တော့ လိုတာပေါ့။
ယာဉ်ထိန်းရဲတွေရဲ့ တာဝန်သိစိတ်နည်းတာလဲ ပါမယ်သူကြီးရေ..။ သူကြီးပြောသလို အရေးပေါ်ကားမြင်..ထိုးရပ်တဲ့ ဥပဒေပြုတာကိုတော့ တကယ်ထောက်ခံပါ၏။ မရပ်သူတွေကို ဒါဏ်ရိုက်။ နဲနဲတော့ သတိထားလာကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
ဟိုတလောက ကြားမိတာက အိန္ဒိယမှာ ယာဉ်စည်းကမ်း ချိုးဖောက်တဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေကိ တစ်ရက် ယာဉ်ထိန်းရဲ ပြန်လုပ်ခိုင်းပြီး သူတို့လို ယာဉ်စည်းကမ်းချိုးဖောက်သူတွေကို ပြန်အရေးယူခိုင်းတယ်ပြောတယ်..။ ဒီမှာလဲ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေ ငွေတောင်းနေမယ့်အစား.. စည်းကမ်းပျက်ယာဉ်မောင်းကို ယာဉ်ထိန်းရဲအဖြစ် တစ်နာရီလောက် လုပ်ခိုင်းစေချင်ကြောင်း..။ ဒါမှ အခြေခံစည်းကမ်းလေးတွေ တက်လာမည် ဖြစ်ပါကြောင်း..။
၀င်းအောင် အသံပဲ ကြောက်ကြတာကလား..
လူနာတင်ယာဉ်ရဲ့ အချက်ပေးတဲ့ အသံကို ၀င်းအောင်..၀င်းအောင်..ဆိုပြီး ပြောင်းလိုက်
ဒါဆို ပွိုင့်လွတ်ပီး..ကားတွေ ဘေးကပ်ပေးလိမ့်မယ်..
ယာဉ်မောင်းကို ယာဉ်ထိန်းရဲ တစ်နာရီလောက်လုပ်ခိုင်းမယ်ဆို
ယာဉ်ထိန်းရဲတွေက သူတို့ကို လုပ်သလို လိုက်လုပ်နေရင်
ရှုပ်ကုန်မယ်။ အရသာတွေ့သွားပြီး မထွက်တော့ဘူးဆိုရင်
လှည်းတန်း မီးပွိုင့်ကတော့ ၊ မကြာသင့်ပဲ အမြဲ ကြာ ၊ ကား အမြဲ ကြပ်တဲ့ မီးပွိုင့်တစ်ခုလိုပါပဲ ။
မီးပွိုင့်ကောင်တာကို manual လုပ်နေလို့ ကားတွေ မပိတ်သင့်ပဲ ပိတ်တယ် ၊ မကြာသင့်ပဲ ကြာတယ်
ကောင်တာကို ဒီအတိုင်း လွှတ်မထားပေးဘူး..တစ်ခါတစ်လေများ 00 မှာ မီးနီနဲ့ ရပ်နေရတာ ငါးမိနစ်မကကြာတယ် ။ ကွေ့ကြောပေးတဲ့အချိန် တဖက်ကိုမီးဝါပြထားလျှင်လည်း.. တမေ့တမောပဲ … ။ မွေးခါနီးလူနာသာ ပါလာလျှင် လမ်းမှာတင် ကလေးမွေးလောက်တယ်
ပြည်လမ်းယာဉ်ကြောကိုချည်း အသားပေး အချိန်ပိုကြာကြာလွှတ်ပေးတာကလည်း လမ်းကြောင်းမရှိလည်း .. ဒီပုံစံပါပဲ ။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိဘူးလို့ပဲ ပြောရမလား … အလုပ်ကို မလေးစားဘူးလို့ပဲ ပြောရမလား … ၊ အေသင်ချိုဆွေလိုပဲ ….. တင်းတယ်လို့ အော်ပလိုက်ချင်တော့တယ် ….. လေဆိပ်လိုက်ပို့ဖို့ နောက်ကျခဲ့ဖူးတဲ့ အဖြစ်တွေလည်း ရှိတယ် …။
ဘုရင်.နောင်မီးပွိုင်.လိုနေရာမျိုးမှာ လူနာတင်ယာဉ်ကို လမ်းရှင်းပြီး လွှတ်ပေးနိုင်ရင်တောင် လမ်းဆိုးတာနဲ. လူနာရဲ.အသက် ခုန်ပေါက်ပြီး ထွက်သွားနိုင်တယ်။ ဒီလောက် ကားကျပ်နေတာ သိရက်နဲ. သက်ဆိုင်ရာက စေတနာလေး နဲနဲထားပြီး လမ်းညီအောင် လုပ်ပေးသင်.တယ်။ စီမံကိန်းကာလက ခဏမှ မဟုတ်တာ၊ အရေးပေါ်ကားကို ရှောင်ပေးချင်တောင် ဘယ်ရှောင်ပေးရမှန်း မသိဘူး။
ကိုရင်ရယ် စိတ်လျော့ပါ .. ဒီမနက် လူများများ (အရင်ကထက်ပိုများတာကိုပြောပါ) သုံးပြီး … လမ်းပေါက်ဖာမလို့ ….. လုပ်နေကြပါတယ် ။ ဒါပေသိ .. ဒီလောက် ကားကြီးတွေ သွားနေတဲ့လမ်းဆိုတော့ … ပြင်လည်း ခဏပဲ ပြန်ပေါက်ဦးမှာပါပဲ …. ။
ရွာလမ်းမှာ နွားလှည်း တသက်နဲ့ တကိုယ်တခါမှ မစီးဖူးလို့ ….. ဘုရင့်နောင် ပွိုင့်က ဖြတ်တိုင်း နွားလှည်းစီးရသလို အတွေ့ ကြုံလေးတော့ရတယ် .. ခွိ ခွိ … ။
ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်ရေးထားတဲ့ ယခုကော နောင်ကော သေချာ စနစ်တကျ ပြုပြင်ထားသင့်တဲ့ ယာဉ်စီးကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်ိုင်ရာ ပြုပြင်သင့်တဲ့ ပြဿနာလေးတွေ ပါ။
အသက် စည်းစိမ် ခန္ဓာ ပေါင်းများစွာဟာ ယာဉ်ထိမ်းရဲ ၊ မီးနီ မီးစိမ်း စနစ်တို့ အပေါ်မှာလဲ မူတည်ကြောင်း ပြောပြထားတဲ့ ပို့ စ် ဆိုလျင် မမှားပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ကုန်းကျော်တံတား ဆောက်လျက်ရှိတဲ့ လှည်းတန်း မီးပွိုင့်မှာ လူနာတင်ယာဉ် ၊ မီးသတ်ကား အချိန်မီဖြတ်ဖို့မလွယ်တဲ့ အကြောင်းကို ၀ိဥာဉ်တစ်ယောက်လိုခံစားပြီးရေးခဲ့ပေမဲ့ တာဝန်ရှိသူများ သတိထားမိချိန်မှစ၍ နောင်အခါ အဆင်ပြေအောင် ထိန်းညှိပြင်ဆင်နိုင်မယ်ဆိုလျင် အင်မတန်အကျိုးရှိမည်ဖြစ်၍ ကြိုက်မိပါတယ်။
လှည်းတန်းမီးပွိုင့်က တစ်နေကုန်ကျပ်တာ … မိုးလင်းက မိုးချုပ်ထိပဲ…
အဲဒီ လှည်းတန်းတံတားကြီး ပြီးသွားတော့…